နန်းဆိုင်နွမ်| November 7, 2012 | Hits:1
| | ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA / SSPP) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီတို့ လားရှိုးမြို့ ရွှေလီခန်းမတွင် တွေ့ဆုံနေစဉ်၊ SSA / SSPP လည်း ညီလာခံ တက်ရောက်မည် ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – ဦးလှမောင်ရွှေ / Facebook)
စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၂၆ နှစ်ပြည့်ချိန်အထိ နိုင်ငံရေးအာဏာ စစ်တပ် ချုပ်ကိုင်ထားဆဲအစိုးရ ခေါင်းဆောင်နေရာ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ အတွက်သာစစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာ ၂၆ နှစ်ပြည့်ပြီစကော့တလန် လွတ်လပ်ရေး၏ အဖိုးအခဆန္ဒမရှိသေးလုို့ စုိုးရိမ်စရာ မရှိတာပါ
Sai hseng November 7, 2012 - 4:54 pm ကျနော် သိရသလောက်တော့ ဒီဖိုရမ် ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ကျားဖြူက ကိုယ်စားလှယ်တွေလဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှာ ပါဝင်တယ် မဟုတ်လားခင်ဗျ။ဒီကိစ္စအတွက် တောင်ကြီးမှာ ပထမဆုံးအစည်းအဝေး လုပ်တုန်းက ကျားဖြူက ကိုယ်စားလှယ် ၈ ယောက်တောင် တက်တယ်လို့ ကောလီ သတင်းဌာန ကတင်တဲ့ သတင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျ….အခု က ကျားဖြူက လေ့လာသူအနေနဲ့ပဲတက်မယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို လွဲနေသလားလို့ပါ…
Reply နန်းဆိုင်နွမ် November 8, 2012 - 5:17 pm အဲ့မှာရေးထားတာက ဦးအိုက်ပေါင်းမတက်တာလို့ပြောတာပါ။ပါတီက လူတွေကတော့ အဲ့ညီလာခံမှာ လေ့လာသူအနေနဲ့တက်မယ်လို့ပြောထားတာပါ
Reply စိုင်းမူဆယ် November 7, 2012 - 6:09 pm ရှမ်းလူမျိုးများအားလုံးတစ်သွေးတစ်သားနဲ့သဘောထားညီညွတ်ရေးကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ် ရှမ်းများအချင်းချင်းပင်မက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသောတိုင်းရင်းသားများအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်သောအားဖြင့်မိမိတို့ လိုချင်သောဖက်တရယ်ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် မြန်မြန်ထူထောင်နိုင်ကြပါစေ့
Reply baby sai November 7, 2012 - 9:05 pm ကျားဖြူကတော့ခေါင်းရှောင်နေပြီ ဒီလိုခေါင်းရှောင်မယ်ဆိုတာထင်သားဘဲ သူကနေရာကောင်းသွားပြီကို ဒီလိုလူတိုင်းပြည်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှာလဲ တိုင်လိုက်ပြီဟေ.ဆိုကျားဖြူ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ကျားဖြူ ရှမ်းအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့မိန်းမကိုလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ခိုင်း နောက်ထပ်မူဆယ်ကတယောက်ကလဲ သားကကျပ်မပြည့် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိုးတက်တော့မှာလဲ စီးပွားရေးအမြင်တွေလဲမရှိ ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်
Reply Taunggyi Resident November 8, 2012 - 1:25 am According to Khun Htun Oo, the conference will bring unity among the political parties and people in Shan State. I can’t see how is going be as he said, as the conference will only assemble the ethnic Shan political parties and its people, while there are many different ethnic groups in Shan State.
Reply noonsifha November 20, 2012 - 12:45 am အင်း. .. ဒါ စာတမ်းဖတ်ပွဲလို့ ကြားတယ်..ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနိုင်းတဲ့ပွဲ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် သတင်းပဲ လွှဲနေတာလား …ကိုယ်ပဲ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေတာလားတော့ မသိဘူး. . .